Vaovao - Inona no antony mahatonga ny valin'ny valizy maotera?
Inona ny antony mahatonga ny valin'ny valizy maotera?
Inona no atao hoe tabataba?
Taorian'ny nanombohan'ny fiara, ny motera dia manao "tsindry" gadona mitovy amin'ny feo mandondona vy, izay mihombo haingana araka ny fihenan'ny motera. Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny motera dia tsy hanao feo toy izany mandritra ny fotoana maharitra. Ny ankamaroan'ny tabataba dia atao mandritra ny fotoana fohy aorian'ny fanombohana mangatsiaka ary avy eo manjavona miadana. Ity ny tabataba amin'ny valizy.
Inona no mahatonga ny valizy maneno?
Ny antony lehibe maneno ny valizy dia ny fahazoana miforona eo anelanelan'ny valizy maotera ny mekanisma, ny ankamaroany dia vokatry ny tsy fahombiazan'ny fanitsiana na ny fanadiovana, toy ny camshafts, rocker arm, ary jack jack.
Ny ankamaroan'ny motera dia mampiasa jacks hydraulic ankehitriny, izay ampiasaina indrindra hanitsiana ny elanelana ateraky ny fiakanjon'ny valizy valizy. Ny fanitsiana mandeha ho azy ny jacks hydraulic dia mahatsapa ny tsindry solika. Rehefa reraka loatra ny ampahany ary mihoatra ny fetran'ny fanitsiana mandeha ho azy dia hitranga ny tabataba. Ny tsy fahombiazan'ny tsanganana jack hydraulic sy ny tsy fahombiazan'ny asa fanitsiana mandeha ho azy dia mety hiteraka feo ihany koa.
Fanadiovana valizy tafahoatra, ankoatry ny tabataba rehefa manomboka (miharihary kokoa rehefa mangatsiaka ny fiara) dia misy lesoka hafa. Toy ny: fiakarana valizy tsy ampy, tsy fahampian-tsakafo, fofona tsy feno, fihenan'ny herin'ny motera ary fanjifana solika avo.
Satria samy hafa ny karazana fiara, dia hafa ihany koa ny fepetra takiana amin'ny valizy. Amin'ny ankapobeny, ny fahazavana ara-dalàna an'ny valizy fidirana dia eo anelanelan'ny tariby 15-20, ary ny famafana ara-dalàna an'ny valizy fanalefahana dia eo anelanelan'ny tariby 25-35.
Inona no fifandraisana misy eo amin'ny tabataba sy ny menaky ny motera?
Satria ny asan'ny fanitsiana mandeha ho azy an'ny jack hydraulic dia tsapan'ny tsindry solika, ny feon-tsofina dia misy fifandraisana mivantana amin'ny solika. Mazava ho azy, ny vinavina dia ny maotera tsy tonta.
1. Fihenan'ny menaka ambany na habetsahan'ny solika tsy ampy
Tsindry menaka ambany, fanosorana tsy ampy ny efitrano valizy; na menaka tsy ampy, ary banga ao amin'ny jack hidy raha miditra amin'ny làlan'ny solika ny rivotra, dia hiteraka tabataba
2. Miditra ny lalan'ny solika ny rivotra mandritra ny fikojakojana
Betsaka ny olona manana an'io karazana traikefa io. Vita ny fikojakojana azy ireo, ary nisy feon-tsivana vetivety raha ny ampitson'iny no nisy ny afo. Raha ny tena izy dia ara-dalàna ihany io toe-javatra io, satria amin'ny dingan'ny famoahana ny menaka ao amin'ilay lalan-tsolika dia foana ny diloilo ao amin'ilay lalan-tsolika, ary mety hiditra ao amin'ilay lalan-tsolika ny rivotra ary hiteraka tabataba. Aorian'ny vanim-potoana iasana dia hivoaka ny rivotra ary hanjavona ny tabataban'ny valizy.
3. Betsaka ny fametrahana karbôna ao anaty motera
Rehefa avy nampiasaina nandritra ny fotoana maharitra ny motera dia hitranga ao anatiny ny fametrahana karbôna. Rehefa miangona amin'ny ambaratonga iray ny petra-bolan'ny karbona dia mety ho voasakana ny lalan-tsolika ka mahatonga ny fiasan'ny jack automatique automatique tsy hahomby ary mitabataba amin'ny valizy.
Ahoana ny fomba hisorohana ny tabataba?
Tena tsotra ny misoroka ny valin'ny valizy. Ny tompona fiara dia mila mitazona ara-potoana fotsiny mifanaraka amin'ny takian'ny mpanamboatra hisorohana ny fitafian'ny motera, izay afaka mampihena ny tranga misy an'io toe-javatra io. Ilaina ihany koa ny misafidy ny menaky ny motera mety tsara amin'ny naotin'ny motera sy ny viscosity an'ny fiaranao, ary aza manenjika an-jambany menaka avo lenta sy ambany-viscosity.